निकुञ्जबाट भारततर्फ दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा जाने चिन्ता - नेपालबहस
निकुञ्जबाट भारततर्फ दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा जाने चिन्ता
| ११:०१:५९ मा प्रकाशित
२७ फागुन,चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भारततर्फ दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा जाने चिन्ता बढेर गएको छ । निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैँडाको चाप बढेपछि सीमा जोडिएको भारततर्फ जाने चिन्ता बढेर गएको हो ।
निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत एवं प्रदेश नं २ का वन सचिव रामचन्द्र कँडेल सीमा क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या बढी भएको भन्दै भारततर्फ जाने खतरा बढेको बताउछन् । घाँसे मैदान र पानीका पोखरी निर्माण गरी आन्तरिक स्थानान्तरण गरेर पूर्वको खगेन्द्र मल्ली र पदमपुर क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने कँडेलको भनाइ छ । उनले भने, “निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्रमा गैँडाको बासस्थानका लागि राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।” राप्ती नदीमा भएको उत्खनन र नदीको पानी खेतीमा सिँचाइका लागि ल्याउँदा निकुञ्जमा पानीको अभाव भएको उनको भनाइ छ ।
कँडेल यसै निकुञ्जमा प्रमुख संरक्षण अधिकृत हुँदा बगेर भारत पुगेका १० वटा गैँडा भारतसँग समन्वय गरी उद्धार गरेर ल्याइएको थियो । पछिल्लो समय भारतले समेत गैँडा फिर्ता दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । निकुञ्जका पूर्व प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलगञ्ज कुँवर सीमा क्षेत्रको भेलौजी आसपासका क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या बढेकाले भारत जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताउछन् । एक दिनमा गैँडा ४० किलोमिटरभन्दा बढी आवातजावत गर्ने भन्दै उनले पूर्वी क्षेत्रको हेटौँडा, रौतहट र सर्लाहीसम्म गैँडा पुग्ने गरेको बताए । उनले भने, “नेपाली क्षेत्रमा गएका गैँडा उचित बासस्थानको अभावमा फर्किएर आउँछन् तर भारत पुगेका भने आउन असम्भवजस्तै छ ।”
निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीले सीमा क्षेत्रको चुरे क्षेत्रबाट जाने सम्भावना कम भए पनि अमुवा खोला र ठोरीतर्फबाट गैँडा भारत जान सक्ने बताउछन् । बर्सातको समयमा बगेर जाने खतरा सबैभन्दा बढी रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो गणनाअनुसार निकुञ्जमा ६०५ गैँडा रहेका छन् । यसै वर्ष गणना गरिँदै छ ।
असहाय तीन परिवारलाई घर हस्तान्तरण ५ दिन पहिले
नेप्सेमा शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकको बोनस शेयर सूचीकृत २ दिन पहिले
अमेरिकामा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा एक बालकसहित चारको मृत्यु २ हप्ता पहिले
प्रदुषण बढेको बेला धुम्रपान गरे ज्यानै जानसक्छ : डा. सुरजकुमार १ हप्ता पहिले
६ नम्बर प्रदेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने १ हप्ता पहिले
धनगढीमा किसान सूचीकरण अभियान शुरु ४ हप्ता पहिले
अमेरिकी पप गायिका गोमेजले संगीतबाट अवकाश लिदै १ महिना पहिले
समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रशंसापत्र वितरण १ वर्ष पहिले
फरवार्ड लघुवित्तको मुनाफा ११.९५ प्रतिशतले बढ्यो, नेटवर्थ कति ? २ महिना पहिले
अब सिटमा एक जना मात्र यात्रु, चढ्दा र ओर्लदा अनिवार्य स्यानिटाइजर ७ महिना पहिले